Dib-u-eegista Buugga - Shaqooyinka Nabadda: hagaha ardayga ee bilaabista xirfad ka shaqeynta nabadda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Dib-u-eegista Buugga - Shaqooyinka Nabadda: hagaha ardayga ee bilaabista xirfad ka shaqeysa nabadda
January 9, 2017 Faallooyinka buugga 1
Shaqooyinka nabada: hagaha ardayga ee bilaabida xirfad ka shaqeysa nabadda waxaa qoray David J. Smith, mug ka mid ah taxanaha: Waxbarashada Nabadda, tifaftireyaasha Laura Finley & Robin Cooper, Da'da Daabaca Macluumaadka, 2016, 183 pp., US $ 45.99 (waraaqaha), US $ 85.99 (adag), ISBN 978-1-68123 -330-7
Cusboonaysii (1-17-2017): Daabacaadda Da'da Macluumaadka waxay bixinaysaa qiime dhimis web oo ah $ 33.99!
[nooca astaanta = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] booqo Daabacaadda Macluumaadka Da'da si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah iyo inaad iibsato “Shaqooyinka Nabadda: Tilmaamaha Ardayga ee Bilaabidda Xirfad Ka Shaqeysa Nabadda. "
[nooca fiican = ””]
Tifatirayaasha tifatirayaasha: Dib-u-eegiddan ayaa ah mid taxane ah oo ay wada-daabaceen Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Nabadda iyo Factis Pax: Journal of Peace Education iyo Caddaaladda Bulshada xagga kobcinta deeqda waxbarasho ee nabadda. Faallooyinkaan waxaa ka mid ah Daabacaadda Da'da Macluumaadka Taxanaha Tacliinta Nabada. Aasaasay 2006 by Editors Edyaasha Ian Harris iyo Edward Brantmeier, taxanaha waxbarashada nabadda ee IAP waxay bixisaa aragtiyo kala duwan oo ku saabsan aragtida waxbarashada nabadda, cilmi-baarista, horumarinta manhajka iyo ku-dhaqanka. Waa taxanaha kaliya ee diirada lagu saaray barashada nabada ee ay bixiso daabacaad weyn. Halkan guji si aad waxbadan uga ogaato taxanahan muhiimka ah.
[/ si fiican]
DDavid J. Smith, oo caan ku ah barashada nabada shaqadiisa lataliye iyo bare iyo doorkiisii ​​hore ee Machadka Nabada ee Mareykanka, ayaa qoray Shaqooyinka Nabadda si aad uga jawaabto su'aasha ardaydu had iyo jeer weydiiyaan isaga: Sideen ku heli karaa shaqo ka shaqeynta nabadda? In qof kastaa samayn karo shaqo nabadeed ku dhowaad shaqo kasta waa sheegasho dhexe oo buuggan ah, taas oo u horseedaysa muraayadaha hagitaanka xirfadeed ee baaxadda ballaadhan ee waxbarashada nabadda. Smith wuxuu buugga u dhigayaa buuga la xiriira cadaadiska ardayda maanta wajahaya inay ula dhaqmaan kuleejka sidii tababar xirfadeed iyo hoos u dhigista waxbarashada farshaxanka xorta ah: waxay ku dhammeyn doonaan kuleejka deyn waxbarasho oo deyn sare leh, suuqa shaqaduna waa adag yahay. Daraasada nabada ayaa isku xirta farqiga, Smith wuxuu soo jeedinayaa, isagoo ardayda ku martiqaadaya inay ogaadaan dareenka ujeedka markay u diyaar garoobayaan shaqooyinka mustaqbalka.
Ardayda jiilka kun-jireed waa dhagaystayaasha bartilmaameedka Smith. Wuxuu soo xiganayaa cilmi baaris ku saabsan codbixinta oo muujineysa sida ay uga go'antahay isbedelka bulshada. Shaqooyinka Nabadda waxay muujineysaa jiilkan xulashooyinka xirfadeed ee la taaban karo. Tobanka cutub waxay soo bandhigaan baaxad weyn oo shaqooyin ah waxayna kula taliyaan ardayda sida loogu diyaariyo iyaga kahor iyo inta lagu gudajiro kuleejka. In kasta oo xirfadaha nabadeed ee "tooska ah" sida gargaarka bani'aadamnimada iyo diblomaasiyadda ay yar yihiin oo ay adag tahay in la helo, Smith wuxuu soo jeedinayaa in "shaqooyinka waxqabadka aan tooska ahayn" ay yihiin kuwa aan xad lahayn. Wuxuu qeexayaa seddex arrimood oo qaabeynaya mustaqbalka shaqada nabada: in lagu badiyo nabada iyo aqoonta isku dhaca dhamaan qeybaha shaqada, ku shaqeynta hal abuurka wax ka qabashada rabshadaha dhismaha iyo kahortaga isku dhaca burburka, iyo xirfadaha "xirfadaha jilicsan" ee laxiriira waxbarashada fanka deeqsiyeed sida hogaaminta, wada xiriirka, iyo xalinta dhibaatooyinka. Cutubyada ku jira Shaqooyinka Nabadda waxay u heellan yihiin shaqooyinka diblomaasiyadda, xuquuqda aadanaha, sharciga, ururada aan dowliga ahayn iyo kuwa dowliga ah oo ay ku jiraan shaqooyinka bani'aadamnimada iyo milatariga, barashada nabadda, caddaaladda bulshada, dhaqdhaqaaqa deegaanka, shaqada caafimaadka, shaqada bulshada, habab caqiidada ku saleysan, farshaxanka iyo sayniska, farsamada, iyo warbaahinta. Lifaaqyada waxaa ka mid ah liistada 86 shaqooyin nabadeed, qaamuus erey bixin ah, liistada ilaha internetka, iyo talooyin ku saabsan akhris dheeraad ah.
Cutub kastaa wuxuu ku bilaabmaa sheeko male-awaal ah oo arday wajahaya su'aalo ku saabsan shaqada nabadda iyo u diyaargarowga xirfadda, ka dib wuxuu la socdaa hagitaan wax ku ool ah. Akhristayaasha waxaa lagu barayaa fikradaha muhiimka ah, sida dhismaha nabadda, nabadaynta, iyo nabadaynta, iyo sidoo kale ururada ku hawlan howlahan. Qoraallada ku saabsan shaqada nabadda waxaa ka mid ah arrimaha iyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee hadda jira sida #BlackLivesMatter, caddaaladda taranka, xadgudubka galmada, xuquuqda LGBTQ, HIV / AIDS, iyo xoogsheegashada ka socota dugsiyada iyo goobaha shaqada. Tirooyinka caanka ah sida Gandhi, Martin Luther King, Jr., iyo Albert Einstein ayaa si istiraatiiji ah loogu sawiray dhalinyaro, oo aan aad uga weyneyn akhristaha. Khaanadaha iyo tirooyinka ayaa isku daraya natiijooyinka cilmi baarista iyo fikradaha aasaasiga ah qoraalka. Cutub waliba wuxuu kaloo kujiraa astaamaha nolosha dhabta ah ee dhalinyarada shaqooyinka nabada, wuxuuna kudhamaadaa su'aalo milicsiga ah oo kusaabsan astaamaha iyo waliba talaabooyinka akhristaha uu qaadi karo si loo sii baaro mowduucyada cutubka. Baab kastaa wuxuu leeyahay liis tixraac ballaadhan leh ilo kala duwan - aqoonyahanno, warar, abaabul, iyo dowladnimo - inbadan oo ka mid ahna waa kuwo hadda socda.
Dhaliishayda ah Shaqooyinka Nabadda ka walwalsan sida ay ugu shaqeyn doonto akhristayaasheeda loogu talagalay. $ 45.99, qiimaha waa ku adag yahay ardayda. Sanduuqyada qoraalka iyo tirooyinka tirada badan, in kasta oo ay qiimo leeyihiin, ayaa muuqaal ahaan isku qalda cutubyada. Dheeraad ah, markii loo wado xirfadaha nabadeed ee caadiga ah, buuggu wuxuu dib ugu celinayaa ka qaybqaadashada muhiimka ah siyaabaha macnaha wanaagsan ee shaqadu u kicin karo rabshadaha aan tooska ahayn.
Si kastaba ha noqotee, dhinacyo badan, Shaqooyinka Nabadda waa buug ay barayaasha nabada sugayeen. Waxay ku qabaneysaa geeska hore ee berrinka iyada oo loo marayo feejignaanta loo dhan yahay ee kala duwanaanta jinsiga, jinsiga, fasalka, iyo jinsiyadda, iyo soo saarista nabadeynta oo ah qaab ballaaran oo loogu talagalay waxbarashada iyo qorsheynta xirfadda. Buuggu wuxuu qiimo u yeelan doonaa la-taliyayaasha hagidda, xarumaha xirfadaha, la-taliyayaasha tacliinta iyo lataliyeyaasha, macallimiinta nabadda, iyo kulliyadaha qorsheynaya horumarinta ama kobcinta barnaamijyada daraasadda. Smith wuxuu si caawiye ah ugu daray shax buugiisa 2014 Dhisidda Nabadda ee Kulliyadaha Bulshada ku saabsan fahanka iyo isku dhafka daraasadaha nabada ee manhajka oo dhan, oo soo jeedinaya macnaha guud ee hay'adeed ee ku saabsan la talinta shaqooyinka Shaqada Nabadda dalabyo. Buuggu waa mid gaar u ah ballaadhkiisa; tilmaamaha shaqo ee la xidhiidha waxbarashada nabadda ee la heli karo oo ah qaab buug (tusaale Tilmaamaha Xirfadda Dhexdhexaadinta waxaa qoray Forrest S. Mossen) oo si khaas ah u takhasusay. Waxaa jira liisasyo shaqo oo dhowr ah oo khadka tooska ah ah, laakiin waxay ka maqan yihiin duruufaha iyo ballaadhinta buugga Smith oo dhammaantood si joogto ah looma cusbooneysiiyo.
Maxaa yeelay, Shaqooyinka Nabadda waxaa loogu talagalay akhristayaasha ardayda, macallimiintu waxay u arki karaan inay qiimo u leeyihiin qoraalka koorsada. Qiimaha sare wuxuu iga dhigayaa mid aan ka labalabeynaynin inaan kula taliyo iyada oo ah qoraal dheeri ah, in kasta oo ay si gaar ah ugu habboonaan lahayd Houston Wood's Martiqaad Daraasaadka Nabadda (2016), oo ay inbadan wadaagaan: cilmibaaris casri ah, iskuxidh balaaran oo dhaqdhaqaaqyo kaladuwan iyo aqoonsiyo kaladuwan, iyo xaalado shaqo oo balaaran oo nabada lagu dhaqmi karo. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah Smith wuxuu soo bandhigayaa fikradaha muhiimka ah ee qoraalka oo dhan, cutub walbana wuxuu soo jeedinayaa ilaha sahaminta ee ka baxsan qoraalka, macallimiintu si macquul ah ayey u meeleyn karaan Shaqooyinka Nabadda maaddaama ay tahay udub-dhexaadka qoraalka - suurtagalnimada taas oo keeneysa su'aalo ku saabsan sida barnaamijyada tacliimeed ay u maleynayaan koorsooyinka hordhaca ah iyo haddii ay boos ka heli karaan manhajka koorsada meheradaha udub dhexaad u ah.
Qaab-dhismeedka ballaadhan ee buugga Smith u aqoonsaday in lagu daro hagidda xirfadaha ee barnaamijyada waxbarashada nabadda ayaa ka dhigaysa dhammaan kuwa ugu muhiimsan ee barnaamijyadu ku mashquuliyaan ardayda falanqaynta muhiimka ah ee nidaamka iyo xaqiiqda dhabta ah ee goobaha shaqooyinka. Smith wuxuu taabanayaa meelaha qaar ee dhaliisha — tusaale ahaan, isku qilaafinta xagjirnimada iyo nabad dhisida, iyo carqaladaynta dadaalada bina’aadanimo ay ku soo rogi karaan dadka bartilmaameedka ah. Wax kasta oo ay tahay goobta shaqada oo ay ardaydu ujeedadoodu tahay inay ka shaqeeyaan nabadda, waxay u baahan yihiin garasho xoog leh oo ku saabsan rabshadaha qaabdhismeedka iyo dhaqanka, oo ay ku jiraan saameynta siyaasadaha neoliberalka iyo dhaqamada neocolonial, iyo kartida iyo xaddidaadda hababyada xuquuqda aadanaha, iyo sidoo kale xirfadaha is-milicsiga asxaabta iyo u doodayaasha. Barnaamijyadu waxay u baahan yihiin inay ka feejignaadaan xaddidaadda tabarucaadda oo ah gelitaanka shaqo ee ardayda dakhligoodu hooseeyo, iyo siyaabaha ay kor ugu qaadista fursadaha adeegyadu u qaabeeyaan waaya-aragnimadaas iyada oo ah dhiirrigelin ka dhigi doonta ka-qaybgalayaasha mudnaanta leh inay naftooda ku dareemaan wanaag, dayaca ku saamayn xun ku yeelan karta bulshada loo adeegay.
Kulliyadda New Jersey
# shaqooyinka nabada
Xarunta Ikeda Podcast ee Betty Reardon: Xiriirka Ka Dhexeeya Sharafta Aadanaha, Xuquuqda Aadanaha, iyo Nabadda
Sharciga Arizona wuxuu mamnuucayaa ka hadalka doodaha cadaalada bulshada, wadajirka iskuulada
The Peace Foundation waxay raadineysaa Maamulaha Barnaamijyada Waxbarashada Nabadda (New Zealand)
The Peace Foundation (Aotearoa / New Zealand) waxay raadineysaa Maamulaha Barnaamijyada Waxbarashada Nabadda iyo Isuduwaha Xiriirka Macaamiisha si ay u siiyaan taageero joogta ah Madaxa Waxbarashada Nabadda. Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: July 17. [sii wad akhriska…]
Raadinta xirfad ku saabsan isbeddelka bulshada iyo siyaasadda xilli carqalad caalami ah ay jirto
Waxaa laga yaabaa 26, 2021 Jobs, Warar & Muuqaal 0
David J. Smith wuxuu siiyaa talooyin xafiisyada mihnadeed ee kuleejka si ay ugu wanaagsan ardayda ugu meeleeyaan shaqooyinka isbedelka bulshada iyo siyaasadeed ee badanaa laga helo qaybaha aan macaash doonka ahayn iyo NGO / IGO. [sii wad akhriska…]
Aqoon-isweydaarsiga Nabadda ee Ardayda Hindisaha Kulliyadda Bulshada: Warbixin
December 10, 2019 Warbixinnada Waxqabadka 0
Barnaamijka Hindisaha Kulliyadda Bulshada ee Waqooyiga Virginia Community College wuxuu qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsan nabadeynta 15-kii Nofeembar, 2019. [sii wad akhriska…]
Krystyna Brown wuxuu leeyahay,
January 9, 2017 at 12: 33 pm